Funny Archives - Amawpyay
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို တကယ် ချစ်လားမချစ်လား စမ်းသပ်နည်းများ…
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို တကယ် ချစ်လားမချစ်လား စမ်းသပ်နည်းများ… (၁) မျက်ခွက်ကို လက်ဝါး နဲ့ ၁၄ ချက်လောက် ဘယ် ပြန် ညာ ပြန် ဆင့်တွယ်ကြည့်ပါ။ အား ပါ ပါစေ… (တစ်ချက်ကလေးမှတောင် ဒေါသ မထွက်ဘူးဆိုရင် သေချာတယ် အဲ့ဒီ့ ယောက်ျားလေး အချစ်က အချစ်စစ် အချစ်မှန် ) (၂) နှာနုရိုး တည့်တည့် လက်သီးနဲ့ စိတ်ရှိလက်ရှိ ထိုးပါ။ သွေးထွက်ပါစေ… (ယောက်ျားလေးဆိုတာ ကိုယ့်အသားနာရင် ခွေးတောင် ပြန်ကိုက်တတ်ကြတဲ့ သူတွေပါ။ သို့သော် ကိုယ့် အပေါ် လက်နဲ့တောင် ပြန်မတို့ဘူးဆိုရင် . . . . …
အေးတာဖဲ တူတော်မောင်တစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်လို့ သွားတယ်။ ဟော်တယ်ဝင်ပေါက်မှာ တံခါးက ၂ ပေါက်။ တစ်ပေါက်မှာ ရေးထားတာက ‘ကျား’ နောက်တစ်ပေါက်မှာက ‘မ’ ကိုယ်က ယောက်ျားဆိုတော့ ‘ကျား’ ဆိုတဲ့အပေါက်က ဝင်လိုက်တယ်။ အထဲမှာ တံခါး ၂ ပေါက်ထပ်တွေ့တယ်…. တစ်ပေါက်မှာ ရေးထားတာက ‘သတို့သား ရဲ့အမျိုးများ’ နောက်တစ်ပေါက်မှာက ‘သတို့သမီးရဲ့အမျိုးများ’ ကိုယ်က သတို့သားရဲ့အမျိုးဆိုတော့ ပထမအပေါက်ကနေပဲ ဝင်လိုက်တယ်။ ဟော.. အထဲမှာ တံခါး ၂ ပေါက်ထပ်တွေ့ပြန်တယ်…. တစ်ပေါက်မှာ ရေးထားတာက ‘လက်ဖွဲ့ပါသူ’ နောက်တစ်ပေါက်မှာက ‘လက်ဖွဲ့မပါသူ’ တဲ့။ ကိုယ့်မှာ ဘာလက်ဖွဲ့မှ မပါတော့ ‘လက်ဖွဲ့မပါသူ’ အပေါက်ကို ဖွင့်ပြီး ဝင်လိုက်တာ.. …
မိန်းကလေးတွေ စိတ်ကောက်တဲ့ အကြောင်း ( ၉ ) မျိုး
မိန်းကလေးတွေ စိတ်ကောက်တဲ့ အကြောင်း ( ၉ ) မျိုး မှတ်လော့… မိန်းမ ဟူသည်မှာ … စိတ်ကောက်ရင် . . .အရင်ချော့ပါ . .။ ပြီးတော့မှ ဘာလို့ကောက်တာလည်းဆိုတာ မေးပါ …။ (၁) စိတ်ကောက်ရခြင်း အကြောင်းများမှာ — — (၂) စိတ်ကောက်ချိန်တန်လို့ကောက်တာပါ … (၃) စိတ်ကောက်သင့်သည်ထင်လို့ ကောက်တာပါ… (၄) စိတ်မကောက်ရတာကြာလို့ကောက်တာပါ … (၅)အချော့ခံချင်လို့ကောက်တာပါ … (၆)ဘယ်လောက်ချစ်သေးလည်းစမ်းချင်လို့ ကောက်တာပါ… (၇)ကောက်လို့ရတဲ့သူမှန်းသိလို့ကောက်တာပါ … (၈)အဆင်ပြေနေတာကြာရင် ပျင်းလာလို့ရန်ဖြစ်အောင် ကောက်တာပါ … (၉)တစ်ခါတစ်လေ အဆဲခံချင်လို့ကို ကောက်တာပါ … မည်သို့ပင်ဆိုကာမူ …
ပိုက္ဆံ ၁၀၀ နဲ႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္နည္း
ပိုက္ဆံ ၁၀၀ နဲ႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္နည္း ဘုရားကအျပန္ လမ္းေလွ်ာက္လာတုန္း ၁၀၀တန္ တစ္႐ြက္ ေကာက္ရတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ ၂လုံးကို(10)၁၀၀လုံးမRဘဲ ဒဲ့ထိုးလိုက္တယ္။ေန႔လည္ ထြက္ခ်လာတာ 10တဲ့။(ဟဟ)ေပါက္ၿပီ ၈၀၀၀ကို ဒိုင္ဆီကထုတ္လိုက္တယ္။ သင္ပန္းကုန္းဘက္ထြက္လာလိုက္တယ္။အဲ့မွာစိတ္ႂကြေဆးျပား 88စာတန္းနဲ႔ဟာ ၄လုံး ဝယ္လိုက္တယ္။ လက္ထဲ ၈ေထာင္ကုန္သြားေရာ။ၿမိဳ႕ထဲျပန္လာၿပီး သူငယ္ခ်င္းကို ၃၅၀၀နဲ႔ ေရာင္းလိုက္တယ္။လက္ထဲ ၁၄၀၀၀ ရလာတယ္။ -ျမစ္ငယ္ဘက္ထြက္လာလိုက္တယ္။ေဆးေျခာက္ ၅က်ပ္သားအိတ္ကို၁၃၀၀၀က်ပ္နဲ႔ဝယ္လာတယ္။က်ဳံးေဘးမွာ အသိrockerဘဲႀကီးကို ၄၀၀၀၀နဲ႔ေရာင္းလိုက္တယ္။လက္ထဲ ၄၁၀၀၀ရလာၿပီ။ ဆီ၁ေထာင္ဖိုးျပန္ထဲ့။ ၿမိဳ႕သစ္ထဲက ငါးဂိမ္းဆိုင္သြားတယ္။၁ေသာင္းဖိုးထဲ့ ပစ္တယ္။ ထိုင္ထိုင္ခ်င္း ထပြက္တယ္။ ၁၈၀၀၀၀ရတယ္။လက္ထဲက်န္တဲ့၃ေသာင္းနဲ႔ေပါင္းေတာ့ ၂၁၀၀၀၀ရတယ္။ ဆိုင္ကယ္ထဲ ဆီ အျပည့္ျဖည့္တယ္။ေနာင္ခ်ိဳကိုလာတယ္။ 88မဝယ္ဘူး။wy ၂ထုပ္ဝယ္တယ္။၁ထုပ္၁သိန္းနဲ႔။ လက္ထဲက်န္တာ၅ေထာင္ဘဲရွိေတာ့တယ္။ မန္းေလးေရာက္ေတာ့ ဘူတာႀကီးသြားတယ္။ ေနျပည္ေတာ္လက္မွတ္ျဖတ္တယ္။ဟိုေရာက္ေတာ့ …
မိန္းမယူခ်င္တဲ့ေကာင္မွတ္ၿပီလား “ကိုႀကီး.. ခ်စ္တို႔..အိမ္ေထာင္ျပဳပီးရင္ေလ..” “အမ္း..” “ကိုႀကီးက ထမင္းေတြဟင္းေတြ ခ်က္ေကြၽးမွာလား” “ဟာ..ခ်က္ေကြၽးမွာေပါ့.. ခ်စ္ေလးကို လက္ေမႊးမီးမေလာင္ ေျခေမႊးမီးမေလာင္ ဘာေမႊးမွ..မီးမေလာင္ေအာင္ထားမွာ” “ဟယ္..တကယ္..ေနာ္..ခ္ခ္” “အမ္း..တကယ္” “ပီးေတာ့ေလ…ခ်စ္..လုပ္ခ်င္တာ လိုခ်င္တာေတြရွိရင္..မၿငိဳျငင္ရဘူးေနာ္ လုပ္ေပးမွာလား” “ၿငိဳျငင္စရာလား..ခ်စ္ရယ္.. ခ်စ္လို႔ယူထားတာပဲ.. အကုန္လုပ္ေပးဦးမွာ..စိတ္ခ်..” “ဟယ္..ေပ်ာ္လိုက္တာ.. တကယ္လုပ္ေပးရမယ္ေနာ္..” “အမ္းပါဆို..ေယာက္်ား ကတိကြာ..” ခ်စ္သူဘဝ သာယာလိုက္တာ.. အိမ္ျပန္ခ်ိန္ေတာင္ မခြဲခ်င္ဘူးရယ္.. အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့..တေနကုန္ေလွ်ာက္လည္ထားသမွ်..ပင္ပန္းပီးအိပ္တာပဲ.. “ေယာက္်ား.. ထ..ထ..ေစ်းသြားရေအာင္” “ဟင္….အမ္း..” အလုပ္ပိတ္ရက္ေလးမ်ား.. ေအးေဆး အိပ္ရမလားမွတ္တယ္.. ေစ်းသြားရဦးမယ္.. မ်က္ႏွာသစ္ပီး.. အခန္းထဲျပန္ဝင္လာေတာ့ ဒင္းက အိပ္ယာထဲက မထေသးဘူး.. “သြားမယ္ေလ..မထေသးဘူးလား” “မိန္းမ..မလိုက္ပါဘူး.. ကိုယ္ဘာသာဝယ္ခဲ့လိုက္ေတာ့” “ဟမ္…ဘာေတြဝယ္ရမွာတုန္း.. မဝယ္တတ္ပါဘူးဆို” “စားပြဲေပၚမွာ.. ဝယ္ရမယ့္စာရင္းေရးထားတယ္..အဲ့အတိုင္းဝယ္ခဲ့ေလ” အမ္မယ္..ေရးထားတာ.. ေစ်းႏႈန္းေလးေတြေတာင္ပါေသးဗ်ာ.. …
ဆောရီးဗျာ နဲနဲများသွားတယ် ညတစ်ညမှာယောကျ်ားဖြစ်သူ ဟာ အရက်မူးပြီး အိမ်ပြန်လာပါတယ်. . . . အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ – ” မိန်းမရေ တံခါးဖွင့်အုံး” လို့ အော်ခေါ်ပေမဲ့ အထဲက ပြန်လည်းမထူး တံခါးလည်း လာ မဖွင့်ပေးတာနဲ့ တံခါးကို ရိုက်ချိုးပြီး အိမ်ထဲ ဝင်လာခဲ့ပါတယ်. . . . . ။ လူကလည်း အရက် အရမ်းမူးနေ-မိန်းမဖြစ်သူကကလည်း အိမ်တံခါး လာ မဖွင့်ပေးတော့ ” တောက်” တခေါက်ခေါက်နဲ့ စိတ်တွေ တအား တိုလာတာပေါ့. . . . . . . ” မတာမ …
ကိုယ့္မိန္းမကို မႈတ္ေပးဖူးလား ၾကာၾကာ မႈတ္ႏိုင္ေလ သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုေကာင္းေလပါ ရွက္စရာေပမဲ့ ေျပာရဦးမယ္ ေယာက်ၤား လုပ္တဲ့သူေတြ ကိုယ့္မိန္းမကို မႈတ္ေပးဖူးလား ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ လုပ္ေပးဖူးပါတယ္ စလုပ္တုန္း ကေတာ့ ရွက္တာေပါ့… ဘဝမွာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ကို ပထမဆုံး မႈတ္ေပးဖူးတာေလ.. မသင့္ေတာ္ဘူး ထင္ရေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ခရီးအတြက္ တကယ့္ကို လိုအပ္ပါတယ္… အထူးသျဖင့္ မိန္းမသားဘက္က ကိုယ့္ေယာက်္ားကို အားနာလို႔သာ မလုပ္ခိုင္းရင္ ေနမယ္ သူတို႔အတြက္ ကေတာ့ တကယ္ကို လိုအပ္ပါတယ္… အခ်ိန္တိုင္းေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး … ေရမိုးခ်ိဳး သန႔္စင္ၿပီးမွ မႈတ္ေပးရတာပါ မဟုတ္ရင္ အဆင္မေျပဘူးေလ.. ႏွစ္ေယာက္သားရဲ႕အခ်စ္ခရီးကို ပိုခိုင္ …
အရင်က Online မှာ ဖင်တပြပြနဲ့ ဓာတ်ပုံတင်တဲ့ မော်ဒယ်
အရင်က Online မှာ ဖင်တပြပြနဲ့ ဓာတ်ပုံတင်တဲ့ မော်ဒယ် အရင်က Online မှာ ဖင်တပြပြနဲ့ ဓာတ်ပုံတင်တဲ့ မော်ဒယ်ယောင်ယောင်တွေ မော်မဒယ် တဒယ် တွေ တွေ့ရင် အံသြမိတယ် ဘာကြောင့်လည်ဆိုတော ဒီမိန်းမတွေ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဒီဖင်ကြီးပဲ ဘာလို့ ပြပြနေလည်းပေါ့ အဒါဘာကြောင်လည်း ။ တစ်ခါတလေ ဆို ဖင်အတုလား အစစ်လား အငြင်းပွားမှုတွေလည်း နေ့တဓူဝ ဖြစ်ကြ ၊ အစစ်ပါဆိုပြီးလှန်ပြကြနဲ့ အို.. ကြည့်ရတာ ဖင်ကြီးကို တစ်ကမ္ဘာတည်ထားသလိုပဲ တွေးမိတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ်လည်း သဘောပေါက်လာတာတစ်ခုက လူတွေဟာ သူတို့မှာ ရှိတာလေးဆို ထုတ်ပြတတ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲလေ။ ဥပမာပေါ့ …. စာပေဗဟုသုတ ရှိတဲ့ …
ပညာလာမစမ်းနက် တစ်ခါတုန်းကပေါ့. ဝိုင်ထုတ် တဲ့နေရာမှာ ဝိုင်အရည်အသွေး ကောင်းမကောင်း မြည်းရတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ ကွယ်လွန်သွားလို့ လူသစ် အစားထိုးခန့်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကြော်ငြာပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ အဝတ်အစား ဖြစ်က တတ်ဆန်းနဲ့ ရေချိန် မှန်နေပုံရတဲ့ လူတစ်ယောက် အလုပ် လာလျှောက်ပါတယ်။ လူက ကြည့်ရတာ အချိန်ပြည့် မူးနေပုံ ရတယ်ဆိုပြီး ကုမ္မဏီ ပိုင်ရှင် ဥက္ကဌက အစပိုင်း မောင်းထုတ်မလို့လုပ်ပြီးမှ ကြော်ငြာ အရ လာလျှောက် တာမို့ ဒီအတိုင်း ပြန်ခိုင်းရင် မကောင်းတတ်တဲ့အတွက် စဉ်းစားပြီး စကားပြောတယ်။ “ကောင်းပြီလေ ခင်ဗျား အရည်အချင်းကို စမ်းသပ်လို့ ကြိုက်ရင် ခန့်မယ် ခင်ဗျားကို ဝိုင် တစ်မျိုးစီ …
ဖုန်းတွေမပေါ်သေးတဲ့ခေတ်က ဟိုတယ်အခန်းနံပါတ် ၃၉ (မိန်းခလေးများမဖတ်ရ)
ဖုန်းတွေမပေါ်သေးတဲ့ခေတ်က ဟိုတယ်အခန်းနံပါတ် ၃၉ (မိန်းခလေးများမဖတ်ရ) ဖုန်းတွေမပေါ်သေးတဲ့ခေတ်အောကားတွေကို ဖုန်းထဲမှာ ကြည့်လို့မရတဲ့ ခေတ်မှာပေါ့အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ လူရည်သန့် လူငယ်တျောက် ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာတယ် ကောင်တာရှေ့ရောက် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် သူဌေးကိုမေးတယ် man – အခန်းနံပါတ် ၃၉ အားလား boss – အားပါတယ်ဗျ man – ကျွန်တော်ယူလို့ရမလား boss – ရတာပေါ့ဗျ man – ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ လူငယ်က အခန်းထဲမဝင်ခင် ကွန်ဒုံး၃ခုရယ် ဓားမြှောင်၆ချောင်းရယ် လက်ဖက်ရည်၂ခွက်ရယ် ရနိုင်မလားလို့ သူဌေးကိုမေးတယ်။ သူဌေးကလဲ ရနိုင်ပါတယ်လို့ သဘောတူလိုက်တယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူအနဲငယ် အံသြသွားပြီး စိတ်ရှုပ်သွားတာတော့ အမှန်ပဲ။ လူငယ်ကို …